Calaamadeeye: websaydhyada ugu tayada sarreeya si loo abuuro astaan ​​khadka tooska ah | Abuurista khadka tooska ah
Maanta waxaan haysanaa boqolaal ilaha webka in noo fududee inaan ku rakibo barnaamij kumbuyuutarka ama ay tahay inuu helo qof karti u leh inuu qabto shaqo si otomaatig ah loo abuuri karo.
Waxaa jira ilo badan oo web ah waxaana ka mid ah suurtagalnimada u sameyso astaan ​​mashruuc kasta, shirkad ama dukaan kasta in aan dooneyno in aan furno waxyar. Maaddaama qof kastaa uusan haysan miisaaniyad ku filan oo uu ku raadsado naqshadeeye ama uu weydiiyo shirkad u heellan iyada, websaydhkan internetka ee aad hoosta ka heli doonto waxay 'badbaadin karaan noloshaada' inaad yeelato astaan ​​ku habboon dukaankaaga internetka, ama xitaa u adeegso dhiirrigelin hal abuur.
1 Soo iibso
3 Sawirada Sawirada
6 Samee Logo Khadka Tooska ah
7 Calaamadaha Bilaashka ah
8 Astaanta beerta
9 Adeegyada Logo Bilaash ah
10 Wax soo saare
Shopify-ka waxaan haysannaa laba ikhtiyaar: si toos ah u aad bogga si aad u sameysato astaan ​​ama u soo dejiso barnaamijka Android loo yaqaan Logo Abuuraha. Waxaad kuheli kartaa astaan ​​daqiiqado yar gudahood aaladda webka adoo galaya magaca, ku darista midab gaar ah, bedelida cabirka astaanta oo ay kujirto qaab aad ku siiso firfircooni dheeri ah sawirka ay alaabada ama adeegyadu noqon doonaan faashado
Waad wax ka beddeli kartaa booska astaanta astaantaada, ugu dambayntii ku soo dejiso iyadoo shardi u ah gelitaanka emaylkaaga. Kheyraad aad u xiiso badan oo webka ah si aad u sameysatid astaamo yar yar ilbiriqsiyo gudahood.
Degelkani waa loo qeexay si loo abuuro astaamo si sax ah bogagga internetka. Waxay ka kooban tahay kumanaan astaamo ah iyo is-jiidis-iyo-dhibic interface si fiican u dhigma booska astaamaha iyo walxaha sameeya astaantaada.
Waxay ka kooban tahay interface aad u dareen leh dhinaca bidix meesha aad ka qaadan karto astaamaha, qoraal iyo qaabab. Dusha sare waxaan leenahay aaladda midabka iyo lakabyada si loo isku daro walxaha kala duwan. Ucraft way fududahay in la isticmaalo oo wuxuu u shaqeeyaa sida soo jiidashada, had iyo jeerna wuxuu ku saleysan yahay inuu yahay qalab fudud oo fudud oo lala yimaado astaan ​​si dhakhso leh.
Sida Shopify waa inaad sameysaa gasho si aad u soo dejiso abuurkaaga.
Websaydhkan wuxuu nagu hagayaa habka loo abuurayo astaan Laga soo bilaabo waa maxay magaca, ka raadi sawirrada dhammaan qaybaha ay leeyihiin (waxay bixiyaan noocyo badan oo wanaagsan oo iyaga ka mid ah) iyo habka tafatirka oo aan ugu beddeli karno qalab kala duwan.
Waa in la caddeeyaa in markan waxaan leenahay astaamo iyo walxo aan isku mid ahayn, sida ay ku dhacdo labadii websaydh ee hore. GraphicSprings waxay ku dareysaa qiimo dheeri ah astaamaha ay ku keydsantahay keydkeeda macluumaadka si ay nooga oggolaato inaan abuurno astaan ​​midabbo badan leh oo siin karta aqoonsi weyn astaanteenna.
Qalabka ay bixiso waa nooc iska caadi ah, in kasta oo ay leedahay waxyaabo gaar ah bixi hadh, dhalaal iyo dusha taabasho kale calaamadaha aan abuuri doonno. Aynu nidhaahno in noocyada kaladuwan ay tahay wanaaggeeda weyn, marka laga reebo haysashada koox naqshadeeyayaal ah haddii aan horeyba u rabnay mid shakhsi ahaaneed iyo mid gaar ah.
Logoshi waxay leedahay fikrad waxyar ka duwan sidii ay ula imaan lahayd isla markaana u abuuri lahayd astaan ​​taam ah dukaankaas internetka ah ee aad rabto inaad sameysato. Marka laga soo bilaabo shaashadda koowaad waa inaan galno magaca shirkadda, halkudhigga, xarfaha iyo xulashada midabka. Marka xogtaas oo dhan la galo, waxaan gujineynaa "Samee Astaamo" barnaamijka abka wuxuu abuuri doonaa taxane aad u kala duwan, si aan u soo xulo qaar.
Isla tan ayaan wax uga beddeli karnaa bedel magaca midabka halku dhigga iyo magaca shirkadda, dooro farta magaca iyo astaamaha kale ee taxanaha ah si aad shakhsi ahaan astaamaha shirkadda wax uga yara yeelato.
Logoshi waxay kaga duwan tahay kuwii hore u sameeyay astaanta iyadoo la siinayo lacag. Qiimaheeda joogtada ahi waa $ 49, markaa waxay ku xirnaan doontaa in qaar ka mid ah astaamaheeda ay runti ku habboon yihiin wixii aad maskaxda ku haysay inaad ku dhex marto lacag bixinta, halka aad haysato fursadaha kale ee bilaashka ah.
Ikhtiyaar kale oo cajiib ah taas raac isla dariiqa sida inta kale ee abuuraha astaamaha liistadan in la doorto magaca, fikradda astaanta oo wax laga beddelo. Waxay u egtahay Logoshi iyadoo la abuurayo taxane aad u ballaadhan oo ah astaamo fikrado kala geddisan leh, in kasta oo ay ku sii yaraato xulashooyinka qaabeynta marka aan ugu dambayn mid dooranno, maadaama ay noo oggolaanayso inaan kala dooranno midabbo dhowr ah iyo waxa isku habeynta cunsurrada noqo, in kasta oo qaab loo sii caddeeyay iyada oo aan la awoodi karin inay "gacmaheenna gelinno".
Waa inaad ugu dambayn sameyso xisaab si aad ugu dhaqaaqdo soo degsashada astaanta cusub la abuuray. Fikrad si fiican loo-fekeray si aynaan ugu baahnayn daabacaadda isla markaana ilbidhiqsiyo gudahood ayaan ku soo daabacaynaa astaantaas degelkeenna si ay macaamiisheennu u bilaabaan inay ula xiriiraan alaabtayada iyo adeegyadayada muuqaal gaar ah.
Samee Logo Khadka Tooska ah
Ikhtiyaar kale oo xiiso leh oo lagu abuurayo astaan ​​ka duwan kuwa kale calaamado leh midabbo fidsan. Waqtiyadan xaadirka ah ee luqadda naqshadeynta ay ku dhex socoto qaybahaas, midabada midabada leh, waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu xiisaha badan liiska, tan iyo, fikrad yar, waxaan abuuri karnaa astaan ​​leh taabasho aad u fiican haddii aan ognahay waxa aan sameyneyno.
Waxay leedahay liis aad u tiro badan oo ka mid ah midka midka ugu caansan uu soo baxo wuxuuna bixiyaa calaamado taxane ah. Isku xirnaanta qaabeynta astaanta astaanta waxay la mid tahay inta kale ee shabakadaha, sidaa darteed waxaad isku arki doontaa gurigaaga haddii aad horeba waqti ugu qaadatay inaad samayso astaamo.
In kasta oo mid kale oo ka mid ah astaamaha Calaamadda 'Online Logo Maker' uu yahay kartida loo soo rogo sawir aan ku dhejin doonno astaanta, taas oo noo ogolaaneysa inaan u qaabeyno naqshadeena ugu dambeysa heer sare.
Markaad aaddo si aad u soo dejiso naqshadeynta, waad ku sameyn kartaa bilaash, in kastoo xalka hoose ee 300 px iyo 75dpi, ama laga soo qaatay xirmada lacagta, taas oo u oggolaaneysa xallinta sare, faylalka vektorka, asalka hufan iyo soo degsashada lacagta ee bil dhan. Waxaas oo dhan waa 29 euro.
Calaamadaha Bilaashka ah
Websaydhkan ayaa ku siinaya taxane si cadaalad ah u ballaaran oo dhammaan noocyada astaamaha inaad dooran karto ka dibna aad wax ka beddeli karto oo aad la qabsan karto naqshadda ugu dambeysa ee aad raadineyso. Isku xirnaanshaheeda waa dareenka ugu yar ee liistada degellada, laakiin waxay leedahay qalab badan oo lagu baaro laguna habeeyo muuqaalka shirkadda ee dukaankeenna internetka ama barnaamij aan ku soo bandhigi doonno Android ama IOS.
Waxaad haysataa ikhtiyaarka bilaashka ah ee curiso astaan ​​adigoon marin akoon xisaabeedInkasta oo haddii aan dooneyno inaan aadno naqshad heer sare ah oo leh sawirada vector PNG, waa inaan bixinnaa $ 9,99. Waxaan sidoo kale la xiriiri karnaa shabakada si aan ugu marno naqshadeynta astaanta gaarka ah ee $ 99 oo bixisa ugu yaraan shan fikradood iyo shan wareeg oo dib u eegis ah.
Ceeb in interface ma aha mid aad u dareen leh, maaddaama ay jahwareer ku dhici karto haddii aan u barannay mid ka casrisan. Dabcan, waqti yar oo aan ka qaadanayno dhinaceena si aan u barano sida loo maareeyo barnaamijka webka, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ka helno wax badan oo ka badan xulashooyinka kala duwan ee aan dib ugu eegeyno qodobkaan.
Waxaan ku laabaneynaa degel websaydh leh is-dhexgal adeegsi weyn si loogu daro qaar ka mid ah astaamo hal-ku-dheg ah Waxaa loo habeyn karaa midab, cabir, dulmar, saamaynta qaar sida hooska iyo dhalaalka iyo tafatirka aasaasiga ah ee qoraalka si loo beddelo farta, kala dheereynta iyo qaabka.
Waxay leedahay saldhig astaan ​​aad u ballaaran, in kastoo leh gaar ahaaneed ayaa la sheegay inuu ku jiro madow iyo caddaan, inkasta oo ay haa tahay, waxay leedahay naqshad si cadaalad ah u guuleysatay oo ka duwan inta kale ee aan ku qasban nahay inaan ku sameysano astaanteena.
Waxaad u baahan doontaa ka tag emaylkaaga si aad uhesho noocyo aan xadidneyn oo astaanta ah oo ka hel naqshadahaaga meel kasta. Websaydh si toos ah ugu socda barta si aanad waqti ugu lumin waxna waxaad ku keydin kartaa astaantaada casriga ama kombuyuutarkaaga.
Adeegyada Logo Bilaash ah
Astaamahan sameeyaha ah waa inaad doorataa qaybta astaantaada, waxaad gashaa magaca iyo halheyska, isla markaana si otomaatig ah ayaa loo soo saaraa naqshad qaabab iyo qaabab kala duwan. Waxay u taagan tahay astaamaheeda midabada leh iyo naqshadaha ku habboon qaybta aan ugu dambayn dooranay. Waxaa laga yaabaa inay tahay mida u horseedi doonta midabka ugu weyn naqshadeena ugu dambeysa, sidaa darteed, xitaa haddii ay leedahay fikrad aasaasi ah abuurista, waxay noqon kartaa mid ka mid ah xulashooyinka ugu dambeeya ee astaanta barnaamijkeenna ama shirkadeena.
Khasaaraha kaliya ee jira ayaa ah inay na weydiin doonto haddii aan rabno astaanta ayaa la jaan qaadi karta kaarka iyo haddii aan dooneyno inaan u dooranno bogga internetka magaca calaamadda. Marka laga gudbo labadan talaabo, waa inaan galnaa emaylka iyo lambarka sirta ah si loo abuuro xisaab sidaasna aan ku heli karno sawirka ugu dambeeya.
Wax soo saare
Nos waxay si toos ah ugu hogaamineysaa isdhexgalka abuurista sawirka astaanta Ugu horreyntii, wax la mahadiyo, maadaama ay jiraan degello internet-ka "la taga" waxoogaa leh shaashadihii hore ka hor intaanan u shaqeynin qaabeynta.
Logmakr waxay u taagan tahay a noocyo badan oo kala duwan oo ah qaabab iyo midabbo si nolol dheeraad ah loo siiyo astaanta aan maskaxda ku hayno. Dusha sare waxaan isticmaali karnaa astaamaha raadinta astaamaha ama guji astaanta muujineysa dhammaan sawirrada si aan u dooran karno mid.
Waxaan haynaa qalab yar laakiin aad u faa'iido badan. Waxaan ku dari karnaa qaabab iyo qoraal, waxaanan gacanta ku haynaa dheriga rinjiga oo noo saamaxaya inaan 'buuxino' aag midabkiisu aan horay u dooranay. Iyada oo nashqado tayo sare leh oo ay leedahay, in yar oo aan u adeegsanno hal-abuurkeenna, waxaan beddeli karnaa sawirrada aad haysato si aad u abuurto mid kuu gaar ah kana duwan naqshadayaasha kale.
Midigta kore waxaan haysannaa xallinta sawirka iyo astaanta keydka. Waxaan dhex mari karnaa sanduuqa 19 doollar ee ay ku kacayso ama bilaash, laakiin iyadoo la raacayo shuruudo lagu aqoonsanayo bogga aan ku abuurnay astaanta. Si fudud ku darista koodhka ay bixiyaan, waxaan sii wadi karnaa inaan kala soo baxno naqshada astaanta.
Annagu nama soo food saarayno koronto-dhaliye sumadeed oo bilaash ah, laakiin halkii laga heli lahaa bogga internetka oo bixiya tiro wanaagsan oo nashqado ah in aan isku dari karno adoo u jiidaya qaab aad u fudud. Daryeel yar iyo u heellan, waxaan samayn karnaa abuuritaanno asal ah oo ka duwan kuwii aan ku soo aragnay inta kale ee beddelka ah.
In ay interface waxaan haynaa qaar la mid ah barnaamijyada tifaftirka ee la aqoonsan yahay, sidaa darteed waxaad dareemi doontaa guriga inaad bilowdo sameynta astaan. Waxaad heli doontaa buugga weyn ee astaamaha, astaamaha iyo walxaha garaafka si aad isugu darsato sida aad rabto.
Sida magaceeda ka muuqata, waxay leedahay wax badan oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa hipster ee bilaabmay dhowr sano ka hor. Marka waxaan wajaheynaa degel leh qaab cayiman oo laga yaabo inay ku habboon tahay websaydh yar oo leh doorbid naqshad taxaddar leh.
Sida Kanvas, waa inaad la ciyaar naqshadaha jira si aad u sameysato astaan ​​kuu gaar ah. Maaha wax matoor aad u badan, laakiin waa aalad aad u xiisa badan oo websaydh ah sababo la xiriira nuance-ka laga siiyay dhaqdhaqaaqa sinta. Qaddar yar waxaad ku soo dejisan kartaa naqshad tayo sare leh.
Websaydh dareen leh oo si fiican loo qaabeeyey oo ah wuxuu si toos ah noogu geynayaa jiilka sawir aan kala sooc lahayn oo nooceeda ah, adeeg ama alaab. Waxyaabaha ku saabsan degelkan ayaa ah inay ahayd mid muran badan dhalisay in la bixiyo astaamo tayo leh oo bilaash ah oo loogu talagalay ganacsiyada yaryar, marka falcelinta naqshadayaashu waxay ahayd 'rabid'.
Natiijooyinka aad ka heli doonto degelkan waa kuwo aad u qurux badan, iyo haddii aan ku darno isticmaalkeeda weyn, waxaan dhihi karnaa inay ka mid tahay kuwa ugu fiican liiska shaki la'aan. Waxaan kudhowaad dhihi karnaa inaad marhore qaadaneysid waqti aad ku aado xiriiriyaha si aad ugu sameysato astaan ​​astaantaada astaan ​​jiffy ah waxaadna horeyba u xasuusin kartaa macaamiishaada cidda aad tahay waxaadna siineysaa daqiiqada ay ku arkaan sawirkaaga astaanta.
Markaad bilawdo naftaada si aad u ogaatid degelkan si aad u sameysatid astaamo, waxaad wajihi doontaa laba ikhtiyaar. Mid waa in loo qaabeeyo astaan ​​saddex tallaabo ah iyada oo la adeegsanayo matoor bilaash ah oo degelkan ah, inta aad ka dhex mari karto 'suuqa sumadda' ee degelkan oo aad ku heli karto astaamo ay sameeyeen nashqadeeyayaasha.
Xitaa waad awoodaa la soco tartamada naqshadeynta Kuwaas oo aad uga qaybqaadan karto si aad u muujiso xirfadahaaga qaabeynta astaanta, haddii aad ogaatay inaad aad ugu wanaagsan tahay.
Ma ogtahay midna astaan ​​sameeyaha dheeraad ah oo aan ku jirin liiskan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » logos » Abuureyaasha astaanta ugu fiican internetka
Liiska weyn! Waxaan jeclaan lahaa inaan soo jeediyo "logofreeway.com" si loogu daro maadaama ay 100% xor tahay.
Sifo noocee ah ayuu leeyahay kumbuyuutarka aan ku shaqeyno?
Abuur kala guur fiidiyoo leh 'Premiere' si fudud